China 90% -99.9999% Yakachena uye Yakakura Kugona PSA Nitrogen jenareta vagadziri uye vanotengesa | KANA
90% -99.9999% Yakachena uye Yakakura Kugona PSA Nitrogen jenareta
PSA Nitrogen Plant inotora musimboti wekuti pasi peimwe kumanikidza, kumhanyisa kwekumhanya kweoxygen uye nitrogen kwakasiyana zvakanyanya pa carbon molecular sieve. Munguva pfupi, okisijeni molecule inoshambadzirwa neakabhoni mamoresi nesefa asi nitrogen inogona kupfuura nemumorekuru nesefa mubhedha wedenga kupatsanura oxygen uye nitrogen.
Mushure mekushambadzira, iyo kabhoni mamoreji sieve inozoitazve nekushungurudza uye nekukanganisa iyo oxygen.
Yedu PSA Nitrogen Plant inoshongedzerwa ne2 adsorbers, imwe mune adsorption kuburitsa nitrogen, imwe mune desorption yekumutsiridza iyo mamorekuru nesefa. Vaviri adsorbers vanoshanda zvakasiyana kuti vagadzire vanokwanisa chigadzirwa nitrogen ichienderera mberi.
1: Iyo michina ine zvakanakira yakaderera simba kushandiswa, yakachipa mutengo, yakasimba kuchinjika, nekukurumidza gasi kugadzirwa uye nyore kugadzirisa kwechena.
2: Yakakwana maitiro dhizaini uye yakanyanya kushandiswa kushanda;
3: Modular dhizaini yakagadzirirwa kuchengetedza nzvimbo yenzvimbo.
4: Iko kuvhiya kuri nyore, mashandiro acho akatsiga, iyo otomatiki nhanho yakakwira, uye inogona kuitika pasina kushanda.
5: Inonzwisisika zvemukati zvinoriumba, yunifomu yekuparadzira mweya, uye kudzora iyo yekumhanyisa mhanyisa yekufema kwemweya;
6: Yakakosha kabhoni mamorekuru nesefa yekudzivirira matanho ekuwedzera hupenyu hwecarbon molecularsieve.
7: Izvo zvakakosha zvezvinhu zvine mukurumbira mabrandi ndiyo inoshanda vimbiso yemidziyo mhando.
8: Iyo otomatiki yekurasa mudziyo weiyo nyika patent tekinoroji inovimbisa iyo nitrogen mhando yezvakapedzwa zvigadzirwa.
9: Iyo ine akawanda mashandiro ekukanganisa kuongororwa, alarm uye otomatiki kugadzirisa.
10: Inesarudzo yekubata skrini yekuratidzira, dova yekuonekwa, simba rekuchengetedza kutonga, DCS kutaurirana uye zvichingodaro.
Pashure: LNG Dyara Nitrogen jenareta Mishini Industrial Nitrogen Machine
Zvadaro: Maindasitiri PSA nitrogen inogadzira chirimwa chekutengesa Nitrogen gasi Kugadzira Machine
Psa Oxygen Kuzadza Oxygen jenareta
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Isu tinogadzira uye tinotumira kunze otomatiki otomatiki chirimwa uye nitrogen chirimwa che humburumbira kuzadza ne la ...